150 Watt n'èzí na-eburu na-echekwa ogwe ọkụ nke ọkụ China Manufacturer
Nkọwa:N'èzí na-echekwa ụgbọala mpempe akwụkwọ,150 Watt Led Na-echekwa Leta Mkpụrụ,Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ
Home > Ngwaahịa > Okwunyere Ogwe Ndị Na-echekwa Ọdụm > Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ > 150 Watt n&#39;èzí na-eburu na-echekwa ogwe ọkụ nke ọkụ
Echiche M - Anyị Bbier 150 Watt Led Na-adọba ụgbọala Lens jiri SMD 3030 LED modules nke na-emepụta ruo 130 Lumens per watt ma nọgide na-enwe mmeri 90% karịa ihe karịrị 36K awa. Nke a Led Car Lot Lot Light Fixtures na -eji ọkwa ọkwa ọkwa nkịtị. Ụlọ elu dị elu na-eme ka ụlọ ọrụ mmepụta ihe a N'èzí na-echekwa ụgbọala mpempe akwụkwọ .
EKWỤKWỤKWỤKWỤKWỌ - 150 Watt Led Street Light pụtapụtara 19,500 Lumens na ike dochie 400 watt Metal halide MH ma ọ bụ HPS / HID ìhè. 5000K agba aja na-eme ka ìhè doo anya. Nke a L ed Shoebox Light nwere ike iji dị ka ogwe ọkụ ụgbọala , ogige ntụrụndụ egwuregwu, okporo ụzọ, okporo ụzọ, okporo ụzọ ma ọ bụ ihe ọ bụla ọzọ.
PHOTOCELL gụnyere na mfe mgbanwe MOUNT- a L ed Dịịrị Okporo Ụzọ Lighting nwekwara photocell maka mgbede ka chi ọbụbọ ojiji. Enwere ike wepu ya ma ọ bụrụ na ọ dịghị mkpa. Anyị O utdoor Street Light na-abịa n'ugwu nwere ike idozi ya ka ọ dabara n'osisi okirikiri. Ọnụ aka dị n'ime ya dị 2.44 sentimita asatọ, ya mere osisi nwere ike ịbụ 2 - 2.4inches. Site n'itinye ugo elu Ekepu oghere L ed nwere ike na-ekpuchi elu ma ọ bụ ala dabere ma ọ bụrụ na ị na-arịgo vetikal ma ọ bụ na-agbatị.
N'èzí na-echekwa ụgbọala mpempe akwụkwọ 150 Watt Led Na-echekwa Leta Mkpụrụ Ejiri ụgbọala na-echekwa ọkụ ọkụ